Incazelo yomaki ebhodleleni lamafutha elibalulekile
Imvamisa, kunezimpawu ezine ezijwayelekile emabhodleleni kawoyela acwengekile, ngakho-ke ake sibheke izincazelo ezahlukahlukene ezimele zona: 1. Amafutha Abalulekile Angahluziwe Amafutha Abalulekile Angahlanzekile futhi awekho amakhemikhali okwenziwa futhi awahlanjululwanga nge-Media Oil . 2. I-Aromatherapy Oil Aromatherapy ...
Ungawukhetha kanjani umthamo nokupakisha kwebhodlela likawoyela elibalulekile？
Kusukela intuthuko yanamuhla yezimboni iholele ekusetshenzisweni kabanzi kwengilazi, amabhodlela engilazi amnyama (a-tawny, aluhlaza okotshani noluhlaza okwesibhakabhaka) abambe iqhaza kakhulu ekupakisheni uwoyela obalulekile.Ngokwakhiwa kwebhodlela lengilazi lesayensi nobuchwepheshe akusavinjelwa kokumnyama nsundu, okuluhlaza okotshani, kanye okwesibhakabhaka, isibonelo, isithwathwa ...
Faka esikhundleni se-aromatherapy rattan njalo
Vula isivalo sebhodlela, cwilisa umkhawulo owodwa we-rattan kuketshezi lwe-aromatherapy, ulikhiphe ngemuva kokuba i-rattan imanzi, bese ufaka omunye umkhawulo ebhodleleni. Uma isetshenziswa endaweni encane (njengendawo yokugezela), inani elincane lezinduku ze-rattan lingafakwa ukufeza umphumela; uma kuyi ...
Indlela yokwengeza amakha ebhodleleni lengilazi
Izinyathelo zokugcwalisa ibhodlela lamakha elidala elivaliwe ngamakha zimi kanje: a. Hlanza ibhodlela lamakha ngamanzi. Bese ufaka amaconsi ambalwa eviniga namanzi ebhodleleni, uphinde ukuhlanze kahle. Lesi sinyathelo esokukhipha igciwane. Isirinji nayo kufanele ihlanzwe kahle. & nb ...
Amasu we-COMI AROMA Reed Diffuser
Yini ama-diffusers omhlanga futhi asebenza kanjani? Ama-diffusers omhlanga athandwa ngokwedlulele ngephunga lasekhaya njengamanje. Kulula kakhulu ukuzisebenzisa; umhlanga ufakwa ebhodleleni lengilazi noma embizeni yengilazi kawoyela we-diffuser onamakha, umhlanga ucwilisa iphunga bese ukhipha iphunga elimnandi elizungeze ikhaya lakho - ...
Kungani kudingeka sisebenzise kabusha amabhodlela engilazi?
Empilweni yethu yansuku zonke, amabhodlela engilazi angabonakala yonke indawo.Amabhodlela e-Glass awumngane omuhle weziphuzo, imithi, izimonyo, njll. Lawa mabhodlela engilazi abelokhu ebhekwa njengezinto zokupakisha ezinhle kakhulu ngenxa yobuhle bazo obusobala, ukuqina kwamakhemikhali okuhle, akukho ukungcola kokuqukethwe, ...
Kanjani inqubo udini ingilazi ibhodlela?
Ngokuthuthukiswa kwamabhodlela amakha, kunokwakhiwa kwamabhodlela amaningi futhi amahle kakhulu abasebenzisi abangakhetha kuwo. Ngakho-ke ukwakheka kwala mabhodlela kwakhiqizwa kanjani? Inqubo yokubumba ibhodlela lengilazi ukulandelana kwezenzo (imishini, i-elekthronikhi, njll.) Iphindaphindwe kulayini olunikeziwe lohlelo ...
Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwamabhodlela e-Tube
Amabhodlela engilazi ahlukaniswe izinhlobo ezimbili, enye ibhodlela elibunjiwe kanti enye ibhodlela leshubhu. Amabhodlela abunjiwe ngokuvamile asetshenziselwa i-aromatherapy, amakha, amafutha abalulekile, njll. Isici esikhulu sebhodlela elibunjiwe ukuthi lisinda kakhulu futhi akulula ukuliphatha, kuyilapho ...
Ungahlukanisa kanjani phakathi kwebhodlela elibunjiwe nebhodlela leshubhu
Izindlela zokukhiqiza zamabhodlela engilazi zihlukaniswe ekubumbeni nasethubhu, ngakho-ke uyini umehluko omkhulu phakathi kwamabhodlela abunjiwe namabhodlela ethubhu? Sizohlaziya lezi zici ezintathu ezilandelayo: 1. Ukubukeka kuhlukile, ukubukeka kwebhodlela leshubhu kubukeka kukhanya, kungconywana, ...
Umlando Wokwenza Ingilazi
Umlando wokwenza ingilazi ungalandelwa emuva eMesopotamiya cishe ngeminyaka yama-3500 BC Ubufakazi bemivubukulo busikisela ukuthi ingilazi yokuqala yangempela yenziwa ngasogwini lwasenyakatho yeSyria, eMesopotamiya noma eGibhithe lasendulo. Izinto zakudala zengilazi ezaziwa kakhulu zazisukela ngonyaka ka-2000 BC futhi kungenzeka ukuthi zenzeke ngengozi umkhiqizo ...
Amabhamuza akha kanjani ebhodleleni lamakha lengilazi?
Ekhiqizweni kwebhodlela lewayini lengilazi, i-bubble ingenye yezinkinga ezihlala zidida amabhizinisi wokukhiqiza. Yize ama-bubbles engathinti ikhwalithi, athinta kakhulu i-aesthetics. Ikakhulukazi kwamanye amabhodlela amakha aphezulu, amabhamuza awavunyelwe ukuba khona. Futhi ...
Uwahlanganisa kanjani amafutha abalulekile
Indlela yokuhlanganisa owoyela ababalulekile Amafutha abalulekile ayizinto eziyigugu futhi ezingashintshashintshi kalula, ngakho-ke kufanele unakekelwe lapho uzilungiselela. Akunconyiwe ukulungisa okuningi ngasikhathi sinye ukugwema ukungcola.Izinhlobo ze-o ezibalulekile ...
Indlela efanele yokugcina amafutha abalulekile
1. Faka owoyela ababalulekile emabhodleleni engilazi amnyama Amafutha abalulekile ayaguquguquka, amelana nokukhanya, futhi ayonakalisa, ngakho-ke kufanele agcinwe emabhodleleni engilazi amnyama. Amabhodlela epulasitiki awakwazi ukusetshenziswa ukugcina amafutha abalulekile. Ikhwalithi kawoyela obalulekile izolimala uma ukwakheka kwamakhemikhali kwepulasitiki i ...
Inqubo ukukhiqizwa ingilazi tube ibhodlela
Namuhla, sizokuthatha ukuthi uqonde inqubo yokukhiqizwa kwebhodlela leshubhu lengilazi: Okokuqala, faka ithubhu yengilazi yobubanzi obuthile obufunwa yikhasimende emshinini. Inkosi izolungisa umshini kahle futhi yenze ithubhu yengilazi ibe yisimo sebhodlela sobude obulinganiselwe nge-bayonet noma nge-scr ...
Yini incazelo yenombolo engezansi kwebhodlela?
Sivame ukuthola izinhlamvu noma izinombolo ezansi kwamabhodlela engilazi. Amakhasimende amaningi abuza ukuthi lezi zinombolo zisho ukuthini. Zimeleni? Imvamisa imishini yokukhiqiza ibhodlela lengilazi yile: umshini womugqa, umshini wezandla, umshini ophendukezelwe, inqubo yawo imishini ingahlanganiswa namasethi amaningi wesikhunta ...
Ukuqonda okulungile kwamafutha abalulekile
1. Ayini amafutha abalulekile Ayini amafutha abalulekile? Ngokwemigomo ye-layman: Amafutha abalulekile uhlobo lwamafutha, uhlobo olukhethekile lwamafutha. Isizathu sokuthi kungani sikhethekile ukuthi kuyabiza futhi kulula kangako, ngoba ngamafutha abalulekile, umphefumulo wesitshalo, kanye nesithako esikhishwe ...
Izizathu zamanani ahlukene wamabhodlela engilazi
Ingabe amabhodlela ejwayelekile engilazi anobuthi? Amabhodlela engilazi athengiswa yiTaobao ngama-dollar ambalwa asetshenziselwa ukugcina ukudla. Kuphephile ukwenza iwayini noma uviniga? Ngabe izoncibilikisa izinto ezinobuthi? Kungani ezinye izinhlobo zamabhodlela engilazi zithengiswa zibiza kakhulu? Ngabe amabhodlela ejwayelekile engilazi akaphephile？ Gla ...
Iphunga –phunga lokuletha ukunambitheka okuhle kuwe
Kunomusho ongasoze walitshalwa ku-The Song Dynasty literati's “Dream Lianglu”: “Shisa impepho, ukhombe itiye, hang izithombe bese uhlela izimbali, izinhlobo ezine zomnkantsha, hhayi ikhaya elikhathele. Incazelo ejwayelekile yile: wan ...
I-Global Glass Bottle Market Outlook
Ucwaningo kanye nezimakethe zikhiphe umbiko webhodlela lengilazi lomhlaba wonke i-Market Outlook (2019-2027) Ngokombiko, imakethe yamabhodlela apakishwe ngengilazi yomhlaba, ebisibiza ama- $ 63.77 billion ngo-2019, kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-US $ 105.44 billion ngo-2027, nge Ihlanganisiwe izinga lokukhula lonyaka lika-6.5% ngesikhathi se-t ...
Ukufakazela ubufakazi kuyisinyathelo esibalulekile ekukhiqizweni kwamabhodlela engilazi
Ikhwalithi yamabhodlela engilazi ihlobene kakhulu nedizayini nekhwalithi yezinto ezibonakalayo, imishini yokukhiqiza, kanye nokukhiqizwa kwesikhunta. Ukufakazela isinyathelo esibucayi kakhulu ekukhiqizeni. Ukufakaza kuthinta ngqo izindleko zokukhiqiza kanye nekhwalithi yebhodlela lengilazi, ngakho-ke kufanele lithathwe ngokungathi sína. 1. Th ...
Buyini ubuchwepheshe be-frosting ne-hollowing bamabhodlela engilazi
Ubuchwepheshe be-Frosting ukunamathisela ungqimba lwesisombululo se-pickling noma ingilazi ethile yombala we-glaze powder kumkhiqizo webhodlela lengilazi, futhi ngemuva kokushisa okushisa okuphezulu ku-580 ~ 600 600, ingilazi yombala wengilazi incibilika ebusweni bebhodlela lengilazi ukuyenza kuvela indlela yokuhlobisa ngokuhlukile ...
Inqubo yokukhiqiza nokupakisha kwamabhodlela engilazi
Kunezinyathelo ezi-6 ukusuka ekukhiqizweni kuya ekupakisheni ibhodlela lengilazi: Ukubhaka, Ukuncibilika, Ukushaywa, I-Annealing, Ukuhlolwa, Ukupakisha. Ukubamba Izinto zokusetshenziswa ezinjengesihlabathi, abicah, nelitshe le-lime kuyaxutshwa futhi kufakwa njalo esithandweni somlilo. Izinto zokuncibilikisa ziyafudunyezwa zincibilikiswe ngaphakathi kwesithando somlilo. Si ...
Imfihlo encane ye-Flameless aromatherapy-Natural rattan VS Fiber rattan
I-rattan yemvelo: Ama-Rattan imvamisa izitshalo zemvelo ezifana nemivini emhlophe, iminyezane / imivini noma umhlanga. Kokubili imikhawulo yemivini igcwele ama-pores, futhi ubude nokugoba komunye nomunye kuhlukile. I-fiber rattan: Okwe-rattan eyenziwe nge-fiber, ama-pores we-rattan asatshalaliswa ngokulinganayo ...
Izinzuzo ze-aromatherapy engenamlilo
Kunezinhlobo eziningi ze-aromatherapy, i-aromatherapy engenamlilo, i-aromatherapy yamakhandlela, i-car aromatherapy, njll. Yonke inhlobo ye-aromatherapy inezinzuzo nezinkinga zayo. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngenzuzo ye-aromatherapy engenacala. & ...